QM oo cambaareysay tacadiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ee Dalka Suudaanta Koonfureed | ToggaHerer
← Mudo kordhin aan Dastuurka Waafaqsaneyn macnaheedu waa khiyaamo shacab oo noqonaysa” dhabarka ii xoq aan kuu xoqee” . qalinkii A/rahman Fidhinle UK
Madaxweyne umadaada ku dhaqan gobolada Somaliland waxay ku leeyihin qur’aanka kor u akhri →
QM oo cambaareysay tacadiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ee Dalka Suudaanta Koonfureed
Published on December 3, 2018 by Magan
Jimciyadda Qurumaha ka dhexeysa ayaa walaac ka muujinaysa xad gudubyo la sheegay in ay ka dhacayaan Dalka Suudaanta Koonfureed,Qaramada Midoobay ayaa dhaleeceysay kufsiyo la sheegay in loo gaystay Haween badan oo kunool Suudaanta Koonfureed.
Iyadoo laga jawaabayo dhibaatooyinkaasi ayaa QM waxaa ay soo saartay baaqyo loo jeedinayo dowladda Suudaanta Koonfureed ee ku aadan ka hortagga xad gudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha gaar ahaan mida Jinsiga ah ee lagu hayo haweenka ku nool dalkaasi.
MSF oo ah Hay’adda dhakhaatiirta aan xudduuda lahayn ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in 125 Haween iyo gabdho isugu jira lagu kufsaday deegaanka Rubkona oo ku dhaw magaalada Bentiu ee wadankaasi Koonfurta Suudaan.
Dagaaladii sokeeye ee dalkaasi ka socday muddo 5 sano ah ayaa sababay dhibaatooyin badan oo ka taagan dalkaasi,iyadoo falalkan ay ku soo beegmayaan xili dhawaan heshiis ay kala saxiixdeen dhinacyada Dowladda iyo Mucaaradka,kaasi oo ay garwadeen ka ahaayeen QM,Midowga Afrika iyo Urur Goboledka IGAD.
David Shearer oo ah Madaxa howlgalka Qaramada Midoobay ee Koonfurta Sudan ayaa ku tilmaamay kufsiga mid musiibo ah islamarkana ay tahay masuuliyada dowladda in ay joojiso, ayna ka hortagto falalkaasi guracan ee ka dhacaya dalkaasi,waxaana sidoo kale loogu baaqay ciidamada qalabka sida in ay ka qeyb qaatan sidii loo joojin lahaa arrimahaasi.